As of Thu, 28 May, 2020 02:50
पछिल्लो समय नेपालका स्थानीय तहमध्ये चर्चामा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका एक हो । रुपन्देहीको मध्यभागमा अवस्थित यो नगर २०७१ सालमा स्थापना भएको हो । पाँच वर्षकै अवधिमा नगरपालिकाले विकास–निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गरेको कार्य सम्पादनका कारण नै यो नगरले चर्चा पाएको हो । पछिल्लो समय नेपालका स्थानीय तहमध्ये चर्चामा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका एक हो । रुपन्देहीको मध्यभागमा अवस्थित यो नगर २०७१ सालमा स्थापना भएको हो । पाँच वर्षकै अवधिमा नगरपालिकाले विकास–निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गरेको कार्य सम्पादनका कारण नै यो नगरले चर्चा पाएको हो । उत्तरतर्फ बुटवल उपमहानगरपालिका र पश्चिममा ओमसतिया गाउँपालिका तथा सिद्धार्थनगर नजिकै रहेको यो नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक–पूर्वाधार, पर्यटन फोहरमैला व्यवस्थापन, उद्योग–व्यवसाय, हरियाली प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरी अघि बढेको छ । अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक अभ्यास गर्दै आएको यो नगरपालिकाको क्षेत्र पनि निकै ठूलो छ । नेपालका अन्य नगरपालिकाहरू स्थानीय विकास–निर्माणमै केन्द्रित रहेको समय यो नगरपालिका भने स्थानीय विकाससँगै कसरी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्दै त्यसको तयारीमा समेत जुटेको छ । तिलोत्तमाले आगामी असोज ९ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसै विषयमा केन्द्रित रही कारोबार संवाददाता मनोरञ्जन शर्माले तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सार :
देशका अन्य स्थानीय तह विकास–निर्माणमै अल्झेका बेला तिलोत्तमाले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । जरुरी हो कि तपाईंको महत्वाकांक्षा ?
हामीहरू पनि देशका अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूजस्तै निश्चिय पनि विकास–निर्माणमै केन्द्रित छौं । लगानी सम्मेलन पनि यसैको एउटा कडी हो । हामीहरू विकास–निर्माणसँगै अन्य सामाजिक विकासका केही काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेका छांै । त्यसैले हामीले विकास–निर्माणसँगसँगै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेका थियौं । नेपालमै पहिलो पटक कुनै स्थानीय तहले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन हो यो । त्यसैको तयारीमा हामीहरू जुटेका हौँ । अहिलेदेखि नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू गर्न सकिएन भने पछि ढिलो हुन्छ । त्यसैले अहिले हामी पूर्वाधार निर्माण, विकासको काम पनि गर्छौं र लगानी सम्मेलन गरी हाम्रो स्थानीय तहमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि नै यो सम्मेलन सुरु गर्न गइरहेका हौं । यो मेरो महत्वाकांक्षा होइन । लगानी सम्मेलन समयको आवश्यकता हो, जरुरी हो । तिलोत्तमामा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत तमाम क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै यस सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य हो । तिलोत्तमा आफैंमा अपार सम्भावना बोकेको भर्जिन सिटी भएकाले यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरूको लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने हामीहरूको विश्वास छ । हामीहरू लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्दा अत्यन्त सुरक्षित छ भन्नेमा विश्वस्त पार्न चाहान्छौं । लगानीकर्तालाई तिलोत्तमा नगर रुपन्देहीमा लगानी गर्न आए लगानी सुरक्षित छ र लगानीमैत्री वातावरण पनि छ भनेर देखाउन नै लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
लगानी सम्मेलनको तयारी ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदारहरूलाई पत्राचार गर्ने काम अधिकांश सम्पन्न भएका छन् । बाँकी पत्राचारका काम भदौं मसान्तमै सकिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्नुहुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, उद्योग, पर्यटन मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराउनेछांै । प्रदेश ६ र ७ का बाहेक अन्य सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । संघीय अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उद्योग, पर्यटन मन्त्रीहरूबीच असोज ८ गते छुट्टै छलफल हुनेछ । साथै मुख्य कार्यक्रम सम्मेलनका दिन असोज ९ गते उद्घाटन सत्रपछि समूहगत रूपमा स्थानीय, राष्ट्रिय र बाह्य लगानीकर्ताहरूबीच छलफल हुनेछ । छलफलमा हामीले बनाएका प्रस्तावित योजनाहरू पेस गर्नेछौं र त्यसमाथि छलफल हुनेछ । इच्छुक लगानीकर्ताहरूले एमओई पनि गर्नुहुनेछ । सम्मेलनमा सांसद, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधि, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाली निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत गरी ५ सय जनाको सहभागिता रहने हामीहरूको अनुमान छ । सम्मेलनको अन्य कामहरू पनि भइरहेका छन् । टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि मेरै नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति र विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी काम सम्पादन भइरहेको छ ।
लगानी सम्मेलनको विषयमा स्थानीय सरोकारवाला संघसंस्थाबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ र सहयोग कस्तो छ ?
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयअघि पनि धेरै संघसस्था तथा सरोकारवालाहरूसँग राय–सल्लाह लिएपछि नै हामीले यो सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका हौं । स्थानीय उद्योग–वाणिज्य संघ, व्यापार संघ–संगठन, कृषि, उद्योग, पर्यटन सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्दै आएका निकायहरूसँग छलफल गरी अघि बढेका हौं । अहिले पनि हामी निरन्तर छलफल गरी कसरी सम्मेलनलाई सफल बनाई लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं । हाम्रो आयोजनालाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र बाह्य लगानीकर्ताहरू पनि सम्पर्कमा आई बुझ्नुभएको छ । अन्य ठाउँमा उद्योग लगाएकाहरूले पनि रुपन्देहीको पनि तिलोत्तमामा स्थानान्तरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको मैले पाएको छु । सबैले अभिरुचिपूर्वक लगानी सम्मेलनलाई लिइरहनुभएको मैले पाएको छु । यो सबैको सामूहिक कार्यक्रम रहेकाले सबैको सहयोगमा सफल हुनेमा विश्वस्त छु ।
लगानी सम्मेलनमा कस्ता योजनाहरूले महत्व पाउँनेछन् ?
हामीहरूले लगानी सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई विशेष महत्व दिएका छौं । दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न योजना लगानी सम्मेलनमा लैजाँदै छौं । हामीले तिलोत्तमाको भूगोल, वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने, सर्वसाधारणको जीवनलाई अप्ठेरो पार्ने खालका योजनाहरू बनाएका छैनौं । त्यसतर्फ हामी सचेत छांै । सूर्तिजन्य, मदिराजन्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक पर्ने योजनालाई लगानी सम्मेलनले निरुत्साहित गर्नेछ । स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित, स्थानीय रोजगारी, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, कृषि, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावित परियोजनामा एकीकृत कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, ढाक्रेबास एकीकृत पर्यटकीय स्थल, मासु प्रशोधन केन्द्र, सिटी कलेज, प्रादेशिक बसपार्क, तिलोत्तमा अटोभिलेज, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, रिङ रोडमा रेल्वे, स्मार्ट हाटबजार, एकीकृत दूध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, स्मार्ट पार्किङ, स्मार्ट बालउद्यानलगायत छन् । तिलोत्तमा नगरभित्रको रिङरोडमा रेल्वे सेवाका लागि त अहिलेदेखि नै काम नै सुरु भइसकेको छ । त्यसैले पनि यो लगानी सम्मेलनमा धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन सफल हुने आधारहरू के हुन् ?
लगानी सम्मेलन राष्ट्रियस्तरमा र स्थानीयस्तरमा हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा हुने सम्मेलनमा धेरै बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन जोड दिइन्छ, तर हामी स्थानीय, राष्ट्रिय तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन जोड दिन्छौं । बाह्य लगानी मात्र भनेको भए अलि अप्ठेरो हुने थियो, तर स्थानीय र अन्य जिल्लाका लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याउने गरी सम्मेलन हुने भएकाले र धेरैको चासोसमेत बढ्दै गएकाले यो लगानी सम्मेलन सफल हुने मात्र होइन, एमओई पनि गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु । प्रदेश सरकारको पनि प्रतिष्ठाको विषय हो यो । प्रदेशमै पहिलो पटक हुन लागेको सम्मेलन सफल बनाउन सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु । आज लगानी सम्मेलन गरेर भोलिबाटै लगानीकर्ताको ओइरो लाग्छ भन्ने सोचाइ हाम्रो होइन । हामीले सुरु गरेको बाटो हो, लगानीकर्ताका लागि यो सम्मेलन अघि बढ्ने सिँढीका रूपमा हुनेछ । लगानीकर्ताहरूले अहिलेदेखि नै चासो देखाउनु भनेको सम्मेलनको सफलताको आधार पनि हो ।अर्को कुरा, लगानी सम्मेलनमा तत्काल लगानी भित्रिने-नभित्रिने एउटा पक्ष होला, अर्को पक्ष भनेको यहाँ लगानीको वातावरण छ है भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई गराउनु पनि हो । लगानी सम्मेलनको तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै महत्व रहन्छ । भविष्यमा कुनै पनि समयमा लगानीकर्ता आउने बाटो खुला भएको छ तिलोत्तमामा । साथै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय, राष्ट्रिय, बाह्य लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकार, स्थानीय व्यावसायिक संघसस्थाबीच छलफल हुने भएकाले यो सम्मेलनले एउटा सम्बन्ध विस्तारको काम पनि गर्नेछ । त्यसैले यो सम्मेलन एउटा कोसेढुंगाका रूपमा रहन्छ ।
तिलोत्तमामा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले के–कस्ता सहुलियत एवं सुविधा पाउँछन् ?
लगानी सम्मेलनमा सम्झौता हुने योजनाका लागि कर छुट, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नगरपालिकामा अत्यावश्यक परियोजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परियोजनासम्म जाने र आउने बाटोको पहँुच सुविधा नगरपालिकाबाट हुनेछ । न्यूनतम ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको पाँच वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । न्यूनतम ३ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १० वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । ३ सय जनाभन्दा माथि ५ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १२ वर्षसम्म व्यावसायिक करमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ । ५ सय जनाभन्दा माथि रोजगारी दिने परियोजनालाई स्थापनाको १५ वर्षसम्म व्यावसायिक करमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ । यसैगरी परियोजनाको भवन, टहरा तथा संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्दा ५० देखि ३ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई ५० प्रतिशत नक्सा पास दस्तुरमा छुट दिने नीति हामीले लिएका छौं । कृषिमा आधारित दुग्ध उद्योग, मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ, कोल्ड स्टोरेज, आदिलाई परियोजना स्थापनाको सात वर्षसम्म नगरपालिकाले लिने व्यावसायिक कर र नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । तिलोत्तमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई परियोजना स्थापनाको सात वर्षसम्म नगरपालिकाले लिने व्यावसायिक करमा लाग्ने रकम तथा नक्सा पास दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुट दिइनेछ । पर्यटन तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित होटल मोटल तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित परियोजनालाई स्थापनाको पाँच वर्षसम्म नगरपालिकाले लिने व्यावसायिक करमा लाग्ने रकम तथा नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । न्यूनतम ५० जनालाई रोजगारी दिने परियोजनालाई पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति करमा शतप्रतिशत छुट र परियोजनाका लागि जग्गा खरिदमा सहजिकरण गरिनुका साथै विद्युत् सेवाका लागि पनि सहजीकरण हुनेछ ।
लगानी सम्मेलनपछि कति लगानी भित्रिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
लगानी सम्मेलनपछि हामीले कम्तीमा पनि ५० अर्ब बराबरको लगानी यहाँ भित्रिने अपेक्षा गरेका छौं । आजको भोलि नआउला, तर ५० अर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य हो । आजका दिनसम्म सम्पर्कमा रहनुभएका लगानीकर्ताहरूको कुराबाट पनि सम्मानजनक लगानी भित्रिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आजकै भोलि नआउला । तर, दुई–चार वर्षभित्रमा लगानीकर्ताको ओइरो लाग्छ तिलोत्तमामा । केही एमओई पनि हुनेछ, लगानी सम्मेलनकै समयमा । लगानी सम्मेलनबाट यहाँ लगानी गर्न सुरक्षित वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहसमेत हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि आउनेमा दुईमत छैन ।
अन्त्यमा कारोबार आर्थिक दैनिकमार्फत के भन्नुहुन्छ ?
तिलोत्तमा २०७१ सालमा स्थापित नगरपालिका हो । बुटवल र भैरहवाको सामीप्यमा रहेको नगरपालिका हो । मुलुकमै पहिलो पटक स्थानीय कानुन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, बिरामीलाई चाहिने रगतको सेवा भुक्तानी, पशु बिमा अनुदान, नगरको फूल र नगरका घरहरूको रंगको कोड निर्धारण, जन्मदिनमा वृक्षरोपण गर्न नगरवासीलाई आह्वान, सार्वजनिक कार्यक्रममा विदेशी फूल तथा खादा–ब्याज निषेध र प्लास्टिक झोलामुक्त नगर घोषणा र हालै मात्र घरजग्गा निर्माणका लागि कित्ता काटमा विशेष व्यवस्थालगायतका नौला कार्यक्रमहरू हामीले अघि बढाएका छौं । यहाँ दिनहुँ नयाँ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट खुल्ने क्रम पनि तीव्र छ । रुपन्देहीकै मध्यभागमा अवस्थित, बीचबाट सिक्सलेन र बौद्ध परिक्रमा पथ, भारतीय सीमा र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिक, पर्याप्त खुला क्षेत्र, सडक, विद्युत्, पानीको पर्याप्तता जस्ता कारणले यहाँ लगानी गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । हामीले तिलोत्तमालाई समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न अपल्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेका छौं । स्थानीय, संघीय र प्रदेश सरकारबाट कतिपय योजना कार्यान्वयन भैरहेका छन्, तर पनि बजेट सीमितताका कारण अपेक्षित कामहरू एकैपटक गर्न नसकिने यथार्थतालाई मनन गरेर आर्थिक विकासमा निजी यो लगानी सम्मेलन हामीहरू सबैको हो । सम्मेलनले जति लगानी ल्याउनेछ, त्यसको फाइदा सबै नेपालीलाई हुनेछ । लगानी सम्मेलनले यहाँ भएका लगानीका अवसरलाई नजिकबाट जान्ने तथा बुझ्ने अवसर दिनेछ । तिलोत्तमामा जति पनि सम्भाव्य योजनाहरू हुन्छन्, ती योजनामा लगानी गरेर कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, लगानीको प्रशासनिक तथा कानुनी बाटो के हो, लगानीसम्बन्धी स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण, परियोजना कार्यान्वयन गरिरहँदा पर्ने व्यावहारिक समस्या हल गर्ने उपाय के हुन् भन्नेबारे सम्पूर्ण जानकारी सम्मेलनले दिनेछ । यी सबै विषयवस्तुलाई नजिकबाट चिन्ने-चिनाउने माध्यमका रूपमा लगानी सम्मेलनलाई लिइएको छ । असोज ९ गते आयोजना हुन गइरहेको तिलोत्तमा लगानी सम्मेलनमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, स्थानीय, राष्ट्रिय बाह्य लगानीकर्ता लगायतलाई उपस्थित जनाई सम्मेलन सफल बनाई लगानीकर्ताको रोजाइ तिलोत्तमा नगर बनाइदिनुहुन म अनुरोध गर्छु । लगानी सम्मेलनको विषयलाई जनमानसमा पु-याउने तपाईं र सञ्चार संस्था कारोबार दैनिकलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।